Nakidzwa neiyo nyowani iOS 11 inodzora nzvimbo neiyi tweak muIOS 10 | IPhone nhau
Nakidzwa neiyo nyowani iOS 11 inodzora nzvimbo neiyi tweak muIOS 10
Kwete kana maawa makumi maviri nemana apfuura, ndakakuratidza iyo nyowani nyowani iyo yakatibvumidza isu kugadzirisa iyo yekudzora nzvimbo, tichichinja kwete chete ayo aesthetics, asiwo marongedzero ayo iwo ma icon ezvishoma anoratidzwa. Muchinyorwa chimwe chete ichocho, ndakakuudza kuti hazvifanire kutora nguva kuti tweak ibude iyo yakatibvumidza kushandisa iyo nyowani iOS 24 yekudzora nzvimbo pane edu zvishandiso neIOS 11 uye jailbreak. Zvakanaka, nguva yasvika. Tiri kutaura nezveControlCenterXI tweak, iyo tweak iyo inotibvumidza isu kunyatso shandura aesthetics yenzvimbo yedu yekudzora kunyangwe isingatipe iyo zvakafanana sarudzo dzekugadzirisa dzatinogona kuwana mune inotevera vhezheni yeIOS, asi, zvishoma zvinopa dombo.
Iyo yekuvandudza yeIOS anga achitungamira kuvhura iyi tweak inonzi LaughingQuoll uye inotitendera nakidzwa neaesthetics yeIOS 11 munzvimbo yekudzora pasina kumutsiridza yedu terminal kune yazvino beta iyo Apple yakatangisa yeiyi inotevera vhezheni yeIOS iyo inosvika mune yayo yekupedzisira vhezheni inotevera Gunyana. ControlCenterXI inotipa inoyevedza nema module, uko kwakasiyana mabasa enzvimbo yekudzora akarongedzwa, ayo atinogona kuwana nekuita 3D Kubata kana nekutsimbirira kwenguva yakareba pachiratidziri.
Mukati me Seregumi yekumisikidza sarudzo, fomu rakapfupikiswa rinoshandiswa nemusimudziri kutumidza zita rekuti tweak, rinotibvumidza isu kumisikidza mwero wekutenderera kwemakona emamojuru, pamwe nekutibvumidza kuwedzera kana kubvisa Wallpaper kumashure kana isu tichiratidza nzvimbo yekudzora. Izvo zvinotibvumidzawo kujekesa chinongedzo chemushandisi zvakati wandei zvakanyanya kuitira kuti kusiyana nenzvimbo dzine rima kuve kwakanyanya.
ControlCenterXI inowanikwa pane BigBoss repo ye $ 1,5, iyo tweak iyo inokosheswa chaizvo kana iwe waifarira nyowani yekudzora nzvimbo yeIOS 11, chimwe chinhu chandisinganyanye kufarira zvachose, asi ndizvo zvazviri, ndingave ndichiifarira kana kwete ndichafanirwa kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Nakidzwa neiyo nyowani iOS 11 inodzora nzvimbo neiyi tweak muIOS 10
Google inogadzirisazve Google News uye mamiriro ekunze
Toca Hupenyu: Guta, yemahara kwenguva shoma